Vaovao - Fomba fikojakojana solomaso
Fomba fikojakojana solomaso
Aorian'ny fividianana solomaso solomaso dia mahalana vao misy mijery ny fikolokoloana ny solomaso. Angamba misy mihevitra fa ny fahavaratra fotsiny no anaovako azy, ary maro ny olona mihevitra fa mividy solomaso izy ireo mba hiarovana amin'ny taratra ultraviolet sy lamaody. Raha ny solomaso mainty hafa dia tsy hoheverin'izy ireo izany. Raha ny marina, raha solomaso solomaso Matetika izy io dia feno fako, ary ny asany dia ho osa rehefa mandeha ny fotoana. Tsy vitan'ny hoe tsy mahatohitra taratra ultraviolet izy io, fa mety hiteraka olana amin'ny fahasalamanao koa.
Ny fikojakojana ny solomaso dia saika mitovy amin'ny solomaso mahazatra. Andao hojerentsika izao ny fomba hikarakarana ny solomaso solomaso.
1. Raha misy tasy, menaka na dian-tànana ny solomaso, ampiasao ny lamba landihazo malefaka amin'ny kojakoja solomaso manokana hamafana ny vovoka na loto amin'ny solomaso. Aza mampiasa fantsika na vokatra misy akora simika mihitsy mba hanesorana ireo teboka eo amin'ny solomaso
2. Rehefa tsy miakanjo dia tokony esorina tsara izy ireo ary kosoka tsara. Rehefa apetraka izany dia aforeto aloha ny tempoly ankavia (raiso ho toy ny mahazatra ny lafiny anaovana), apetaho eo ambony ny fitaratra, aforeto lamba fanadiovana lens, ary apetraho anaty kitapo manokana. Tandremo mba tsy ho voageja amin'ny zavatra sarotra na voahidy mandritra ny fotoana maharitra ny solomaso sy ny endriny.
3. Mandrara ny fiparitahan'ny rano maharitra, rendrika anaty rano ary apetraka amin'ny toerana raikitra mba hiposahan'ny hazavan'ny masoandro; Voarara ny fampitana maharitra amin'ny herinaratra na vy
4. Diniho ihany koa ireo toerana izay mora manangona menaka sy volo vaky, toy ny tempoly sy fonosan'ny orona. Aza adino, aza manasa amin'ny rano mafana be na mametraka azy amin'ny toerana mando.
5. Mora ihany koa ny manimba endrika rehefa maka solomaso amin'ny tanana iray.
6. Raha tsy tomombana na tsy mahazo aina ny bika dia mankanesa any amin'ny fivarotana optika hankalazana ny fanitsiana arak'asa.
Diniho bebe kokoa ny fikarakarana solomaso solosaina, mba ho voaro tanteraka kokoa ny solomaso, ary ho voaro kokoa ny solomaso.